Fikradda asaasiga ah ee Geedi waa: Somalia waa inaan la iloobin! Halkudhaggan wuxuu ka yimid, qoraal uu qoray qoraa Soomaali ah murtidan ka soo xigtay oday ku nool burburkii wadanka gudihiisa. Sheekadan waxay ku saabsantahay haweeney Somali ah oo dib ugu laabatay waddanka ka dib markii ay ka qaxday, waxayna booqatay magaaladii ay ka soo qaxday oo burbursan. Waxay la kulantay oday , wuxuu waydiiyay waxa ay ka qabato waddanka ay u qaxday? Waxay ugu jawaabtay waxaan ahay “Wariye qora buugagta” ka dibna wuxuu yiri haddaba waxaad halkan ka helidoonta wax badan oo aad qorto ama aad ka sheekayso, bal eeg hareeraheena sida uu u egyahay waddan dhisnaa oo burburay, bal eeg wadankaagii bilicsanaa sida uu u galay dagaalkii sokeeye. Haweeneydii oo ay ka muuqatay xasuus muruga leh ayuu odaygii ku yiri “Ma doonayo in aan walwal ku galiyo hase yeeshee waxaan filayaa maadaama aad tahay qoraa in aad aduunka si fudud warkeena u gaarsiin karto, waxaan kaa codsanlahaa in aad noo noqoto afhayeen arinteena aduunka u gudbya,waxaan si gaar ah kaaga codsanayaa in aad aduunka u sheegto Somalia waa in aan la iloobin, waa murugo iyo ciil in lagu ilaabo adigoo jira oo waliba dhiban”.
Somalia waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan dunida. Geedi waxa uu rabaa in uu dadka uga warbixiyo xaaladaha sida ugu macquulsan ee ku saabsan Soomaalida ku sugan Geeska Afrika iyo sidoo kale Soomaalida ku nool qurbaha ee ka soo qaxay dagaalka, rabshadaha iyo gaajada oo markaas raadinaya nolol taas ka wanaagsan. Dadkaasi waxay ku kala baahsanyihii wadamada dariska la ah Somalia, meelo ka mid ah qaaradda Africa ama meel aad uga fog sida America iyo Yurub.
Wargeyska Geedi News Soomaliya waxuu wax ka qoraa dhaqanka, arimaha bulshadeed, horumarinta siyaasadeed, taariikhda iyo juquraafiga iyo horumarinta bulshada. Waxa uu markasta hal ku dhagiisu yahay “ Somalia waa in aan la illoobin!”. Geedi waxa uu rabaa in uu abuuro dareyn dhab ah iyo ixtiraamka Soomaalida loo hayo aduunka dhamaam. Waxaa kale oo aan u baahinaa ururada samafalka aduunka in ay Somalia fiiro gaar ah u yeeshaan oo ay ka caawiyaan arimaha daryeelka bulshada iyo horumarinta wadanka.
Kleine leugens worden op hun valse hielen door grotere gevolgd! (Somalische wijsheid)